Warshadda Alaabta Kiimikada Kiimikada Maalinlaha ah. Soo -saareyaasha, Alaab -qeybiyeyaasha Kiimikada Kiimikada ee Maalinlaha ah
Bixinta warshad tayo sare leh budada iodide Ammonium C ...
Sahayda warshadda 1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluo ...
Daahirsanaanta Sare 98% Palmitoleic acid cas 373-49-9 oo leh b ...
Sahayda warshad Triphenylphosphine TPPO CAS 791 ...
Steroids daahir sare Nandrolone Decanoate CAS 360-70 ...
Steroids daahirnimo Sare Testosterone Enanthat CAS 315-3 ...
Sahayda warshadda 2-Nitrobenzaldehyde/O-Nitrobenzaldehy ...
Surfactant qiimo jaban SODIUM ETHYL 2-SULFOLAURATE/Sod ...
Kaydka noolaha N-Tris (hydroxymethyl) methyl-3-amiin ...
Soo-saaraha daahirsanaanta sare 2-Aamino-5-chlorobenzophenon ...
Daahirsanaanta sare 99% Sodium taurocholate Cas 145-42-6 wit ...
Saaraha sahayda qurxinta Anti gabowga S-Acetyl glu ...
Dheeraadka Nafaqada Nafaqada Sare ee Sialic Acid/N-acety ...
Sahayda warshadda 99% 5,5-dimethylhydantoin/DMH CAS 77 -...
Wakiilka kululaynta daryeelka maalinlaha ah ee Warshadda Vanillyl Laakiin ...
Sahayda warshadda 6-Hexanalactone/6-Caprolactone oo leh g ...
Sahayda Warshadda Iibinta Tayada Sare 1,3-Dimethyl ...
Tayada sare 3,5-Dimethoxytoluene (DMT) CAS 4179-19 -...
Cosmetic peptide Nicotinoyl Tripeptide-1 budada Nicotinoyl-GHK
Nicotinoyl Tripeptide-1 wuxuu ka kooban yahay peptides ee taxanaha amino acid, caddeynta, iyo isku-darka Niacin oo leh awood koritaan kolajka oo aad u fiican Fiitamiin peptides oo la filan karo inay hagaajiso khadadka caddeynta iyo xariijimaha.
Xiriirka: Erica Zheng
Kooxda: +86 177 1767 9251
Decapeptide-12 anti-pigmentation iyo maqaarka iftiiminaya CAS 137665-91-9
Decapeptide-12 waa oligopeptide oo ka kooban kaliya 10 amino acids. Oligopeptide-kaan waxaa lagu yaqaanaa waxqabadkiisa anti-tyrosinase.
Cosmetic peptide Nonapeptide-1 budada ka hortagga midabaynta iyo iftiinka maqaarkaCAS 158563-45-2
Nonapeptide-1 waa peptide iftiin maqaarka, oo laga soo qaatay hormoonka kicinta melanocyte (MSH). Waxay ka hortagtaa hawsha tyrosine-ka melanocytes-ka, ka-hortagga melanin-ka oo waxay kaa caawineysaa xitaa soo-saarka maqaarkaaga iyadoo yareynaysa midab-soo-saarka.
Cosmetic peptide Hexapeptide-10 anti-gabowga iyo CAS 146439-94-3
Hexapeptide-10 waa peptide dardaro ah oo ay ku jiraan haraaga Alanine, Isoleucine, Lysine, Serine iyo Valine. Waxay kordhisaa isku-darka laminin V iyo α6-integrin si kor loogu qaado isku xirnaanta unugyada, oo leh dib-u-habeyn maqaar oo aan caadi ahayn oo muuqda iyo kartida adkeynta. Hexapeptide-10 waxay kor u qaadeysaa dib-u-dhiska kolajka waxayna caawisaa yareynta khadadka wanaagsan iyo xajmiga daloolka.
Cosmetic peptide Hexapeptide-9 budada ka hortagga duuduubka kahortagga gabowga CAS 1228371-11-6
Hexapeptide-9, peptide Collagen, wuxuu gacan ka geystaa xoojinta unugyada dhismaha iyadoo si dabiici ah ula falgaleysa unugyada maqaarka taas oo kor u qaadeysa hannaanka dib-u-nooleynta.
Cosmetic peptide Pentapeptide-18 anti-gabowga ka hortagga duuduubka CAS 64963-01-5
Pentapeptide-18 wuxuu yareeyaa qoto-dheeraanta laalaabkii wajiga oo ay sababtay foosha murqaha wajiga, gaar ahaan foodda iyo indhaha agtooda.
Cosmetic peptide Pentapeptide-3 budada ka hortagga duuduubka CAS 135679-88-8
Pentapeptide-3 waa walax ka hortagga duuduubka oo aad u awood badan.
Cosmetic peptide Tetrapeptide-30 oo loogu talagalay dhalaalka maqaarka iyo iftiinka
Tetrapeptide-30 waa peptide cusub oo loo sameeyay si loo dheellitiro midabka maqaarka.
Cosmetic peptide Tetrapeptide-4 anti-gabowga iyo ka-hortagga duuduubka
Tetrapeptide-4 waa tetrapeptide biomimetic-ka cusub kaas oo bixiya cufnaanta maqaarka oo culeys ku ah saamaynta cufnaanta iyada oo is-kicinaysa soo-saaridda qaybaha unugyada isku-xirka si loo ilaaliyo muuqaalka dhallinta iyo cufnaanta cufnaanta.
Cosmetic peptide Tripeptide-29 waxay kordhisaa kolajka iyo dayactirka maqaarka CAS 2239-67-0
Tripeptide-29 waxay kordhin kartaa isku-darka kolajka iyo dayactirka maqaarka. Hoos -u -dhaca kolajka waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee samayska duuduubka.
Peptide Cosmetic Tripeptide-1 GHK CAS 72957-37-0
Tripeptide-1 waxay awood u leedahay inay kiciso wax-soo-saarka kolajka ee maqaarka, kollajin badanna waxay ka dhigan tahay laalaabkii oo yaraaday iyo maqaarka oo yaraaday.
Cosmetic peptide Copper Tripeptide-1 Ghk-Cu budada anti-gabowga CAS 89030-95-5
Cope tripeptide-1 waa naxaas naxaas ah oo ah tripeptide-1, waxaa mararka qaarkood loo soo gaabiyaa GHK-Cu. Cope Tripeptide-1 waxay hagaajin kartaa dabacsanaanta maqaarka, hufnaan, adkeyn waxayna yareyn kartaa khadadka iyo laalaabkii. hagaajinta koritaanka timaha iyadoo la ballaarinayo timaha timaha.